စိန်ဝင်း ● သနားစရာ သတင်းစာဆရာ (မိုးမခ) ဧပြီ ၂၃၊ ၂၀၁၈ သူ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှ ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြသည်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခေတ်မှာ ဖေ့စ်ဘွတ်ဆယ်လီတွေရဲ့ နိုင်ငံရေးမှာ အရေးပါမှုက ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဂျာနယ်လစ်တွေထက် ပိုလာပါ တယ်။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဂျကာတာမှာလုပ်တဲ့ မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်တဲ့ နိုင်ငံတကာကွန်ဖရင့်မှာ ဟောပြော တဲ့ အင်ဒိုနီးရှားသတင်းစာဆရာတစ်ယောက်က သူတို့သမ္မတ ဂျိုကိုဝီက ဖေ့စ်ဘွတ်ဆယ်လီတွေကို ညစာစားပွဲနဲ့တွေ့ဆုံတာ နှစ်ခါရှိသွားပြီ။ တို့သတင်းထောက်တွေကို ဘယ်တုံးက တွေ့ဖူးလဲလို့ ပရိတ်သတ်ကိုမေးတယ်။ အင်ဒိုနီးရှားသတင်းစာဆရာတွေအားလုံးက နိုး ပါတဲ့။ (ကိုကတော့ တို့နိုင်ငံလည်း ဘာထူးလို့လည်းလို့ စိတ်ထဲပေါ်မိတယ်။) ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်မရောက်ခင် ဒီထက်ပိုတိတိကျကျပြောရရင် ဆိုရှယ်မီဒီယာခေတ်မတိုင်ခင်က သတင်းခန်းတွေက သတင်းတွေကို ထိန်းချုပ်ထားတယ်။ သတင်းတွေက စိစစ်ပြီးမှ ထွက်လာတာ။ အဲဒီတော့ သတင်းစာဆရာတွေက ပါဝါကြီးတယ်။...
မောင်မောင်စိုး ● နှင်းဆီနီနီ အိပ်မက်များ – (၁၉၇၅ – ၁၉၈ဝ) – အပိုင်း (၆၉) (မိုးမခ) ဧပြီ ၂၃၊ ၂၀၁၈ ● CPB ရခိုင်ပြည်နယ် CPB ရခိုင်ပြည်နယ်သည် ၁၉၄၈ ခုနှစ်ကစပြီး တည်ရှိခဲ့သည့် အခြေခံဒေသဟောင်းဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် CPB ရခိုင်ပြည်နယ်၏ အဓိက ခေါင်းဆောင်များ ကေဒါများသည် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများကိုယ်တိုင်ဖြစ်ကြသည်။ ၁၉၇၇ ခုနှစ်ဝန်ကျင်က CPB ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရေးမှူးအဖြစ်တာဝန်ယူထားသည့် CPB ရခိုင်ပြည်နယ်၏အဓိကခေါင်းဆောင်မှာ ရဲဘော်ကျော်မြဖြစ်သည်။ သူ့အား ၁၉၇၅ ခုနှစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းသော ဗဟိုကော်မတီတွင် ပေါလစ်ဗျူရိုအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်တင်မြှောက်ထားပြီဖြစ်သော်လည်း ရခိုင်၌တာဝန်ယူဆဲဖြစ်သည်။...
ကာတွန်း မင်းထက်လူရဲ့ တကောင်တော့ရပြီ …
ကာတွန်း မင်းထက်လူရဲ့ တကောင်တော့ရပြီ … (မိုးမခ) ဧပြီ ၂၃၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း မင်းထက်လူ
ဇင်လင်း ● ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံရေး အရွေ့သစ် အစပြုနိုင်တော့မည်လား … (မိုးမခ) ဧပြီ ၂၂၊ ၂ဝ၁၈ မြန်မာတို့၏ ပြက္ခဒိန်အရ နှစ်ဟောင်းတစ်ခု ကုန်ဆုံး၍ နှစ်သစ်တစ်ခုသို့ ကူးပြောင်းခဲ့ပြန်ပြီ။ နှစ်သစ်တစ်ခုသို့ ကူးတိုင်း ပြည်သူလူထု လိုလားတောင့်တမှုအရှိဆုံးဆန္ဒတစ်ခုမှာ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်သည်။ ယခုနှစ်သစ်တွင် ယင်းဆန္ဒကို အပြည့်အဝ မဟုတ်သည့်တိုင် ရာခိုင်နှုန်းငါးဆယ်အထက် ရရှိနိုင်မည်ဆိုလျှင်...
လှကျော်ဇော – တပ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး – အပိုင်း (၁) ပြည်သူတွေရဲ့နှလုံးသား ဘယ်မှာရှိတယ် (မိုးမခ) ဧပြီ ၂၂၊ ၂၀၁၈ ၁၄ ဧပြီ ၂၀၁၈ နေ့က ဘီဘီစီက ထုတ်လွှင့်သွားတဲ့ “မြန်မာ့အရေး ကမ္ဘာအရေးကဏ္ဍ – ၂၀၂၀ မှာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် သမ္မတဖြစ်လာနိုင်မလား” ဆိုတာကို နားထောင်ပြီးနောက် တချို့အချက်များအပေါ်ကျွန်မ...
ကာတွန်း နေညိုအေး (ဥသျှစ်ပင်) – မှန်တဲ့ ထောင်ချောက် (မိုးမခ) ဧပြီ ၂၂၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း နေညိုအေး
မယ်မွှေး – Dear Facebook (မိုးမခ) ဧပြီ ၂၂၊ ၂၀၁၈ ဤစာကိုရချိန်တွင် ကျွန်မ၏ ကိုယ်ရေးရာဇ၀င်ကိုရှင်တို့ စစ်ဆေးပြီး စက်ရုပ်တစ်ခုထံမှ အော်တိုမက်တစ်လွှတ်လိုက်သော အကြောင်းကြားစာမဟုတ်ကြောင့် သိပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ ကျွန်မမှာ အသက် ၆၀ ပြည့်ပင်စင်စားကာစ အဘွားကြီးတစ်ဦးဖြစ်သောကြောင့် အသုံးမ၀င်သော အငြိမ်းစားတစ်ဦး၏ အမြင်ဟု ပစ်ပစ်ခါခါ မထားစေလိုပါ။ * ကျွန်မသည် ယမန်နေ့ကပင်...
ကာတွန်း Joker – အချင်းချင်းတွေမို့ (မိုးမခ) ဧပြီ ၂၁၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း Joker
လမ်းဘေးသတင်းထောက် – ဘယ်တော့ ပြောင်းလဲမှာလဲ (မိုးမခ) ဧပြီ ၂၁၊ ၂၀၁၈ မဆလ ခေတ်မှာ မွေးခဲ့ပေမယ့် မဆလအကြောင်း သေချာ မသိခဲ့ဘူး။သိတတ်တဲ့ အရွယ်ရောက်တော့ အရေးအခင်းဖြစ် စစ်အစိုးရ ဆိုတာတက်လာတယ်။ လမ်းတွေမှာ ပိတ်ဆို့နေတဲ့ သစ်ပင်တွေ ၊ မြောင်းတွေ ရှင်းလင်းတယ်။ တိုက်တာအဆောက်အဦတွေ ထုံးလိုက်သုတ်တယ်။ မြောင်းရှင်းရင်းနဲ့ ပုံးရှာ ပလုံး...
စမ်းစမ်းတင် – ဟိုတွေး ဒီတွေး
စမ်းစမ်းတင် – ဟိုတွေး ဒီတွေး (မိုးမခ) ဧပြီ ၂၁၊ ၂၀၁၈ ဒီနေ့ ဧပြီ ၁၉ ရက် မေမေရှိနေသေးရင် အသက် ၉၃ နှစ်ရှိပြီ၊ ခု ဧပြီ ၁၇ ရက်က ဆုံးပါးသွားတဲ့ ဘာဘရာဘုရ်ှနဲ့ တနှစ်တည်းဖွား၊ သတင်းမှာတော့ သမ္မတဟောင်း ကတော်လည်းကတော်၊ သမ္မတဟောင်း အမေလည်း အမေဖြစ်တဲ့...
သတင်းစာဆရာကြီး ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ကွယ်လွန်ခြင်း ၄ နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်ပြုလုပ်မည် K ငြိမ်းချမ်း (မိုးမခ) ဧပြီ ၂၁၊ ၂၀၁၈ သတင်းစာဆရာ၊စာရေးဆရာကြီး ဟံသာဝတီဦးဝင်းတင်ကွယ်လွန်ခြင်း ၄နှစ်ပြည့် အောက်မေ့ဖွယ်အခမ်းအနားကို ဧပြီလ၂၁ရက်နေ့ တွင် မန္တလေးမြို့တောင်သမန်အင်းစောင်းရှိ တောင်လေးလုံးကျောင်း သူဌေးဘုရားပြင်တွင် နံနက် ၉ နာရီမှ ၁၁ နာရီထိ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။...
ကဗျာဆရာ ကောက်နွယ်ကနောင်ကွယ်လွန်ခြင်း ၀မ်းနည်းမှတ်တမ်း (မိုးမခ) ဧပြီ ၂၀၊ ၂၀၁၈ ကဗျာဆရာ ကောက်နွယ်ကနောင် ကွယ်လွန်ကြောင်း ကြားသိရ၍ မိသားစုနှင့်အတူ စာပေမိတ်ဆွေများနဲ့အတူ ကြေကွဲဝမ်းနည်းပါကြောင်း မှတ်တမ်းပြုအပ်ပါသည်။ သူ့ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်မှာ ဧပြီလ ၁၀ ရက် နေ့စွဲနဲ့ ရေးခဲ့တဲ့ ကဗျာလေးကို အလေးပြု တင်ပြလိုက်ပါတယ်။ ငါလွင့်မျောပုံဆန်းကြယ် မဟော်ဂနီရောင် ဝါနွမ်းရွက်ခြောက်ကြွေတွေ မိစ္ဆာမမျက်ရည်ရှိုက်သံ လေအသုပ်မှာ...
မောင်လူရေး – ဇိတ်ဇလီ (မိုးမခ) ဧပြီ ၂၀၊ ၂၀၁၈ ကမဝ ၊ ကမာဝ၊ ကမားဝ လို့ ရေးထုံးသုံးမျိုးနဲ့ ရွာလေး။ မာန်အောင်ကျွန်းရဲ့ အနောက်ဖက်ကမ်းခြေမှာ ရှိတယ်။ ဟိုတယ်စီမံကိန်းလိုလို အသံထွက်လာတော့ တချိန်က တသိန်းတောင်ပေးမယ့်သူမရှိတဲ့ ကမ်းစပ်ကမြေတွေ ခြံတွေဟာ တဆယ် နှစ်ဆယ် သုံးဆယ် လေးဆယ်တွေပေးလာတော့ ထုံးစံအတိုင်း ရွာသားတွေ...
ကာတွန်းရွှေဗိုလ်ရဲ့ တိုးရင် … တက်မယ် … (မိုးမခ) ဧပြီ ၂၀၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်းရွှေဗိုလ်
မောင်အောင်မွန် ● ကျွန်တော်တွေးမိသလိုရေးပါမည် (၃၃၂) (မိုးမခ) ဧပြီ ၂ဝ၊ ၂ဝ၁၈ သေရာပါသွားမည့် ဦးဝင်းတင်လွတ်ဆိုသည့် သတင်းအမှား (၁) ကျွန်တော့်အသံလွှင့်သမားဘဝ သတင်းကြေညာခဲ့ရသော အကြိမ်ထောင်နှင့်ချီရှိခဲ့ပါ၏။ ထိုအကြိမ်လောက် ကသိကအောက် နိုင်၊ ရှက်လည်းရှက် မကျေမနပ်နှင့် မေ့မရသည်မျိုး မကြုံခဲ့ဖူးပါ။ ထောင်ကအကျဉ်းသားများ လွှတ်ချိန်၌ ကျွန်တော့်ဝေဒနာ ဟောင်း ပြန်သစ်ပြန်ထလာစမြဲပင်။ (၂) ဦးဝင်းတင်နှင့်...
ကာတွန်း မောင်ရစ် – ရွှေမိနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ – You can say that again! (Academic Weekly Journal, Yangon) မိုးမခ၊ ဧပြီ ၂၀၊ ၂၀၁၈ No tags for this post.
နေသန် ● အစိမ်းရောင်နယ်မြေက ယုန်ကလေး (ဘာသာပြန်) (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၉၊ ၂၀၁၈ Hassan Blasim ၏ The Green Zone Rabbit အား မြန်မာဘာသာသို့ ပြန်ဆိုသည်။ ဥတွေပေါ်မလာခင်တုန်းက ကျွန်တော် ညတိုင်း အိပ်ရာမဝင်ခင် ဥပဒေအကြောင်း ဒါမှမဟုတ် ဘာသာရေးအကြောင်း စာ အုပ်တစ်အုပ်အုပ်ကို ဖတ်နေကျ။...
ညိုရင့်နွယ် (ရေဦး) ● အထီးကျန်မိုးသားတွေ တလူလူလွင့်လို့ (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၉၊ ၂၀၁၈ မြောက်ဖျားကတိမ်တွေဆီမှာ မသေသေးတဲ့ အသံတွေရှိတယ် ကျောက်ဂမူစွန်းအောက်မှာ ကလေးအရိုးစု စတစ်ကာလေး လွင့်နေတယ် မအိပ်နိုင်တဲ့မြစ်ကြီးလဲ ဟန်မပျက်စီးဆင်းနေတယ် မပျက်နိုင်တဲ့ရိုးရာနဲ့ မပြတ်နိုင်တဲ့လောဘနဲ့ အပြိုင်စီးဆင်းကြ တချက် တချက် ထဖောက်လိုက်တဲ့ မီးကျည်တွေမှာ မျက်ရည်ရောင်စုံဖြာလို့ အထီးကျန်မိုးသားတွေ၊ သင်းကွဲငှက်တွေ ခြောက်သယောင်းထ...
ကာတွန်း နရဏီရဲ့ ဆုတောင်း … (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၉၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း နရဏီ
မောင်ကျေးရေ – မြေအောက်ရေဥပဒေ ပြုစုရာတွင် (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၉၊ ၂၀၁၈ စကားဦး မြန်မာနိုင်ငံတွင် မြေအောက်ရေကို ရှေးမြန်မာမင်းများလက်ကထဲက အသုံးပြုလာခဲ့၏။ ရန်ကုန်မြို့တွင် မြေအောက်ရေကို သာယာဝတီမင်းလက်ထက် (၁၈၄၂) ခုနှစ်က စတင်သုံးစွဲခဲ့သည်။ အင်္ဂလိပ်လက်ထက်တွင် ရန်ကုန်မြို့နယ်နမိတ်အတွင်း မြေအောက်ရေ ထုတ်ယူသုံးစွဲရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ ပြဌာန်းပြီး ဥပဒေအတိုင်း လိုက်နာ...
ကိုသန်းလွင် ● စတီဖင်ဟောကင်း ပေးသောလက်ဆောင် (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၈၊ ၂ဝ၁၈ (၁) စတီဖင်ဟော့ကင်းကတော့ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါပြီ။ သို့သော် သူသည် အလွန်ရှုပ်ထွေးပြီး အဖိုးထိုက်တန်သော ဖြေရှင်းရန် ခက်ခဲသောပြဿနာတစ်ခုကို ထားခဲ့ပါသည်။ သိပ္ပံပညာရှင်များအဖို့ ရှေ့လာမည့် နှစ်ပေါင်းများစွာ ဖြေရှင်းရမည့်ပြဿနာ ဖြစ်ပါသည်။ ဒေါက်တာဟော့ကင်း (Dr. Stephen Hawking) ၏ပြဿနာမှာ စကြဝဠာကြီးနှင့်ပတ်သက်၍...
ကာတွန်း ATH ရဲ့ အညစ်အကြေးတွေကိုတော့ ဆေးလိုက်ပြီ …
ကာတွန်း ATH ရဲ့ အညစ်အကြေးတွေကိုတော့ ဆေးလိုက်ပြီ … (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၈၊ ၂၀၁၈ No tags for this post.
မောင်မောင်စိုး ● အမျိုးသားအဆင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲနှင့် တတိယပင်လုံ (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၈၊ ၂၀၁၈ ၂၀၁၅ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက်နေ့ တနိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ် NCA အား အစိုးရနှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ၈ ဖွဲ့ သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးနောက် NCA စာချုပ်သည် စတင်အသက်ဝင် လာခဲ့သည်ဟု ဆိုရပါမည်။...
သိဒ္ဓတ္ထမူခါဂျီ ရေးတဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာတွေ နားစက်နေတာနဲ့ လှုပ်ရှားနေတာ (၃) – နိဂုံး ဘာသာပြန် မောင်ရစ် (နယူးယောက္ကာ မဂ္ဂဇင်း၊ ဇန် ၈၊ ၂၀၁၈) မိုးမခ၊ ဧပြီ ၁၈၊ ၂၀၁၈ (၆) ကျနော့်အဖေ လဲပြီး ၁၂ ရက် အကြာမှာ အဖေ့သွေးခုန်နှုန်းက အတော်ပြန်ကောင်းလာပါတယ်။ ဆရာဝန်တွေက အဖေ့အသက်ရှုပိုက်ကို...
နှစ်ဆန်း၁ရက် မန္တလေးမြို့တွင်း ပရိတ်ရွတ်ကြ ငါးလွှတ်ကြ ချမ်းမြ၊ မိုးမခ၊ ဧပြီ ၁၈၊ ၂၀၁၈ နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့မှာ မန္တလေးမြို့ ရပ်ကွက်များတွင် အန္တရာယ်ကင်း ပရိတ်တရားတော် ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ကြပြီး ကျုံးတောင်ဘက်ဘေး၌ ငါးဘေးမဲ့လွှတ်ခြင်းများပြုလုပ်ကြစဉ်။ (သတင်းဓာတ်ပုံ – ချမ်းမြ) Tags: ချမ်းမြ
မောင်တမ်းတ ● ဖိနပ်တစ်ရံနဲ့ နိဗ္ဗာန် (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၇၊ ၂၀၁၈ မနက်တုန်းက အမေ့သူငယ်ချင်းရဲ့အလှူရှိလို့ ကျွန်တော်တို့မိသားစု ဗဟန်း ကြားတောရလမ်းက ပါဠိတက္ကသိုလ် ညောင် တုန်းကျောင်းတိုက်ကို ထွက်လာခဲ့ကြတယ်။ ရွှေတိဂုံဘုရားကြီးရဲ့ အရှေ့ဘက်မုဒ်ရှိရာလမ်းကဝင်မိတော့ ရန်ကုန်ကိုပြန် ရောက်ပြီးကတည်းက အခုထက်ထိ ရွှေတိဂုံဘုရားကြီးပေါ် ကျွန်တော်မရောက်နိုင်သေးတာ ပြန်သတိရတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း စိတ်နဲ့ပဲ ကြည်ညိုပြီး ကျွန်တော်တို့...
မောင်မောင်စိုး ● နှင်းဆီနီနီ အိပ်မက်များ (၁၉၇၅-၁၉၈ဝ) – အပိုင်း (၆၈) (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၇၊ ၂၀၁၈ ● ၁ဝ၈ စစ်ဒေသ သခင်တင်ထွန်းကျဆုံးပြီးနောက် အစိုးရထိုးစစ်များ အတန်ငယ်လျော့ပါးသွားသည်။ တကွဲတပြားဖြစ်နေသော CPB တပ်ဖွဲ့ များသည်လည်း ပြန်၍စုစည်းနိုင်ခဲ့ကြသည်။ အဓိကခေါင်းဆောင်ကျဆုံးပြီးနောက် တပ်ကိုပြန်လည်စုဖွဲ့ရန် ဗိုလ်ခင်ညို ဦးစီး သည့် အင်အား...
ကာတွန်းဆွေသားရဲ့ သတိထားစို့ ဝန်မင်းရေ … (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၇၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်းဆွေသား
တင်မိုး ● အဆာမပြေ (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၇၊ ၂၀၁၈ ကိုယ့်စကားကိုမှ ကိုယ်အားရတယ်။ ကိုယ့်စကားကမှ ကိုယ့်ခံစားမှုကို ကိုယ်စားပြုနိုင်တယ်။ သူ့စကားကျတော့ လျှာယားပြီး လျှာမလည် ဘာရယ် ညာရယ် မသိ အဟိ … အဟိ … နဲ့ ဂလိထိုးခံရသလို အိုးတိုးအမ်းတမ်း ဖြစ်တယ်။ အစားဆာတာထက် စကားဆာတာ ခံရခက်ပါဘိ။...
“စာကြည့်တိုက်က ပရဟိတသဘောနဲ့လုပ်လို့မရဘူး။ နားလည်မှ လုပ်လို့ရတာမျိုး” Save The Library မှ ကိုမောင်မောင်စိုးနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း ရိုးပြေပြစ်အောင်၊ Academic Weekly Educational Journal (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၇၊ ၂၀၁၈ “အလိမ္မာ စာမှာရှိ”” ဆိုသည့်အတိုင်း စာဖတ်ခြင်းအလေ့အထကို ငယ်စဉ်ကပင် ပြုစုပျိုးထောင်ပေးမှသာ နောင်အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်များ အသိပညာအလိမ္မာ တိုးပွားပေလိမ့်မည်။...
>Q &amp; A for MoeMaKa Charity Drive for Burma